Wararka - Fiber carbon si fudud ma u jabaa |EWIG
Baaskiil Buur Kaarboon
Baaskiil Laab Kaarboon
Baaskiil aluminium ah
Aluminium baaskiil koronto
Fiber carbon si fudud ma u jabaa |EWIG
Fiber kaarboon waa walxo isku dhafan.Waxay ka kooban tahay xirmo yar yar oo fiilooyinka ah oo ay la socdaan epoxy. Fiber carbon aad buu u xoog badan yahay marka la kala bixiyo ama la foorarsado, laakiin daciif ah marka la cadaadiyo ama la kulmo shoog sare (tusaale bar kaarboonka waa mid aad u adag in la leexiyo, laakiin wuu dillaaci doonaa). si fudud haddii dubbe lagu dhufto).Aniga oo tixgelinaya in ajir fiber carbonwaxay taageeri kartaa culeyska fuustaha oo lagu daray dhammaan xoogagga uu raacuhu ku daro (kuwaas oo ka badan kara dhowr jeer miisaankooda jirkooda) macnaheedu maaha mid daciif ah.Waxaas oo dhan wax ka yar miisaanka aluminium ama bir la barbar dhigi karo.
Laakiin noocyada ciidamada qaarkood -- sida saamaynta fiiqan -- waxay dhaawici karaan fiilooyinka iyo epoxy daciifinta walxaha, wax aan u badnayn birta.
Ka sokow, Marka si fiican loo sameeyo, fiber carbon wuxuu noqon karaa mid ka adag birta oo aad u badbaado leh.Laakiin marka si khaldan loo sameeyo, qaybaha kaarboon-fiber-ka ayaa si fudud u jebi kara.Si ka duwan qalabka kale, haddii aad xoojiso qaybaha kaarboon-fiber-ka, waxay u badan tahay inay burburiyaan waddada.
Kaarboon Fiber ma waaraya?
Fiber Carbon waa mid kiimiko ahaan deggan, daxalka u adkaysta, mana daxaloobayo.Waxaa xusid mudan in isku-dhafka fiber-carbon ay sababi karaan daxalka galvanic marka ay la xiriiraan biraha qaarkood.Inkastoo aysan u horseedi doonin daxalka dusha sare ee muddada gaaban, alaabooyinka daxalka ayaa isku dara oo u horseeda waxyeelo waqti ka dib.
Miyay xun tahay inaad kaga tagto baaskiil kaarboon qorraxda?
Fiilooyinka kaarboonku waxay aad ugu nugul yihiin iftiinka qorraxda.Ku dhawaad ​​wax kasta oo soo-gaadhis ah ayaa si weyn u kordhin doonta fursadaha ay ugu qaadi karaan kansarka maqaarka.Weligaa ha u oggolaan in baaskiilku ku jiro iftiinka qorraxda tooska ah.
Baaskiil fiber kaarboon ah miyuu u qalmaa?
Laakiin inkasta oo ay tahay mid ka jaban sidii hore,Baaskiil koronto oo fibre ah oo Shiinaha ahweli wuu ka qaalisan yahay badi aluminium iyo birta beddelka ah.Markaa kuwa raadinaya baaskiilka oo aan waxba u dhimayn miisaanka, ka jawaab celinta ama waxqabadka, markaa haa, fiber carbon waxay noqon doontaa doorashada guud ee ugu fiican xaaladaha badankood.
Fiimyada kaarboonku ma dillaacaan?
Cilad naqshadeed iyo dhibaatooyinka wax soo saarku waxay horseedeen guuldarro lama filaan ah markii la fuulay.Kaarboonku ma yeesho dildilaacyo yaryar oo hadhow fashilmi kara sida bir ama jir daawaha ah oo laga yaabo, dabeecad ahaan waxa ay yihiin walxo isku dhafan.
Habka fiber carbon waa mid adag, xoogguna wuxuu la xiriiraa moodeelka marada kaarboonka iyo habka wax-soo-saarka iyo dhumucda.Guud ahaan marka loo eego,jir kaarboon warshadMa fududa in la jebiyo, iyo sifooyinka kaarboonka kaarboonku waxay u adkeysan karaan cadaadiska dusha sare laakiin uma adkeysan karaan barta.Sidaa darteed, haddii qaabka kaarboonku uu ku dhaco dhulka, waxaa jiri doona asal ahaan kaliya lacquer, iyo haddii caarada dhagaxa lagu dhufto, waxaa jiri doona khatar ah in la jebiyo, laakiin guud ahaan waxay ka xoog badnaan doontaa qaabka guud ee aluminium.
Waa maxay sababta fiber kaarboonku si fudud u jebiso?
Tuubbada fiber kaarboonka ma fududa in la jebiyo, taas macnaheedu maaha in aanay jabin doonin.Shuruudaha isticmaalka warshadaha ee tuubooyinka fiber carbon ayaa guud ahaan ka sarreeya kuwa isticmaalka maalinlaha ah, iyo suurtogalnimada jabitaanka ayaa sidoo kale ka sarreeya.Awoodda ay soo saaraan qalabka warshadaha ayaa aad uga sarreeya awoodda gacmaheenna.Haddii aadan taxaddarin, tuubada fiber-ka kaarboonka ayaa laga yaabaa in gebi ahaanba la tirtiro.Jebinta tuubada fiber carbon waxay la xiriirtaa cilad iyada u gaar ah iyo sidoo kale culeyska ka badan culeyska.
Tuubada fiber kaarboonku waxay ka samaysan tahay prepreg fiber carbon, iyo prepreg fiber carbon lafteedu waxay ka baqayaan inay dalooliyaan walxo fiiqan.Qaybaha prepreg fiber carbon waa xadhkaha fiber carbon iyo alaabta xabagta.Adayga xabagta lafteedu ma sarayso.Nuxurka daloolintu waa in cadaadis weyn la saaro meel yar.Sidaa darteed, marka tuubada fiber carbon ay la kulanto shay fiiqan, Waxaa jiri doona goyn.
Intaa waxaa dheer, caabbinta xirashada ee tuubada fiber carbon ma aha mid sare, iyo khilaafka muddada-dheer ee maxalliga ah ayaa sababi doona daal badan.Ka dib marka cadaadis la saaro, sidoo kale way jabi doontaa.
Baaskiilada kaarboon fiber-ka ah ayaa aad iyo aad ugu caan baxay suuqa marka ay noqdaan kuwo si ballaaran loo heli karo, waxayna aad ugu fiican yihiin kuwa miisaaniyada ku jira.
Baaskiiladaan waxaa laga sameeyay isku dhafka u dhexeeya fiber carbon iyo resin, waxayna caan ku yihiin xooggooda iyo cimrigooda.Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inaad la yaabto ilaa intee buu sii jiri doonaa baaskiilka fiber-karboonka?Gaar ahaan marka la barbar dhigo baaskiil bir ah oo dhaqameed?
Waxa ugu dambeeya ee aad rabto inaad samayso waa inaad lacag ku kharash garayso baaskiil cusub si aad u ogaato in aanu dib u soconayn wakhti ka dib sidii aad moodaysay inay dhici doonto.Tani waa sababta ay muhiim u tahay inaad sameyso cilmi-baaristaada ka hor inta aanad go'aan gaarin.
Mahadsanid, waxaanu ku hubayn doonaa dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay si aad u gaadho go'aan wanaagsan.Maqaalkan, waxaad ka heli kartaa wax badan oo ku saabsan nolosha shelf ee baaskiilka fiber carbon, iyo sida ay u awoodaan inay u adkaystaan ​​imtixaanka waqtiga.
Baaskiilka fiber kaarboonsi fudud kuma jabin doonaan sababtoo ah alaabta xoogga leh ee loo isticmaalo in lagu sameeyo.Baaskiilada fiber-ka kaarboon si joogto ah ayaa loo horumariyaa oo loo wanaajiyaa marka uu wakhtigu sii socdo, horumarka farsamada ee weave iyo epoxy ayaa dhacaya si loo hubiyo in agabka ugu tayada sarreeya loo isticmaalo samayntooda.Baaskiiladaan waxaa loo qaabeeyey oo loo dhisay hab hubinaya inay xoog ku leeyihiin meelaha jirkooda ah ee loogu baahan yahay.Markaa, kaarboon waxaa hubaal ah in loo isticmaali karo in lagu sameeyo fareeme baaskiil aad u waara oo aan si fudud u jabin doonin.
Sidoo kale tan, fareemada baaskiilka fiber-karboonka ayaa dhab ahaantii la xaqiijiyay inay ka sarreeyaan daawaha tijaabada shaybaarka, waxaadna heli kartaa noocyo badan oo ah baaskiillada fiber-karboonka ah kuwaas oo leh iska caabin weyn.
Dhab ahaantii, khaladaadka ugu weyn iyo jebinta ka dhacda baaskiilada kaarboonka waxba kuma laha baaskiilka, badidoodna waxay hoos ugu dhacaan qaladka isticmaalaha.Tani waa sababta ay muhiim u tahay inaad daryeesho oo si habboon u ilaaliso baaskiilkaaga.
baro wax badan oo ku saabsan alaabta Ewig
kaarboon fiber korantada laalaabi baaskiil baaskiil
fiber carbon fiber baaskiil buur koronto
yaa sameeya qaabka baaskiilka kaarboon ee ugu fiican
sida loo hagaajiyo jir baaskiil kaarboon
Sida loo sameeyo jir baaskiil fiber carbon ah
Waqtiga boostada: Dec-25-2021
sida loo ilaaliyo baaskiil laalaabida|EWIG
sidee ku ogaataa in baaskiilka laalaabayo uu wanaagsan yahay |...
maxaa baaskiil laalaab ah ugu socdaalaa|EWIG
20 ″ baaskiil laablaaban oo ku habboon waxa...
Baaskiil laalaabsanaayo maxaa u wanaagsan|EWIG
Dhirta Kooxda Tuulada Chenghaotou, Magaalada Chenjiang, Aagga Farsamada Sare ee Zhongkai, Huizhou, Guangdong, Shiinaha
Hadda Na soo wac:0086-752-2233951
Ewig technology© Xuquuqda daabacaadda 20102021 : Xuquuqda daabacaadu way xifdin.